Consignment (အပ်ကုန်) စနစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် ပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
စီးပွား/ကူးသန်းထုတ် စာစောင်များ	Consignment (အပ်ကုန်) စနစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် ပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
မော်တော်ကားအရောင်းစင်တာများမှ Consignment (အပ်ကုန်) စနစ်ဖြင့် အရောင်းစင်တာဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ (၁၀.၉.၂၀၁၂) ရက်နေ့အထိ ကုမ္ပဏီ (၉၁) ခုအား ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများ၏ Consignment (အပ်ကုန်) စနစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထား မှုမှာ ပထမအကြိမ် ၊ ဒုတိယအကြိမ် ၊ တတိယအကြိမ် ၊ စတုတ္ထအကြိမ် ၊ ပဉ္စမအကြိမ် ၊ ဆဌမအကြိမ်အထိများပြား လာပြီဖြစ်ပါ၍ ကုမ္ပဏီများ၏ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ စာရင်းဇယားများ စနစ်တကျဖြစ်စေရန်နှင့် စစ်ဆေးမှု လွယ်ကူစေရန် အောက်ပါအချက်များ ၊ စာရွက်စာတမ်းများ ပါဝင်လျှောက်ထားရပါမည် -
(က) မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းမည့်လျှောက်လွှာပါရှိရမည်။
(ခ ) ကုမ္ပဏီမှ Consignment (အပ်ကုန်) စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီး Consignment အကြိမ်အလိုက် မော်တော်ယာဉ်များ၏ ခွင့်ပြုချက် (ပါမစ်) ၊ ရောက်ရှိမှု ၊ ရောင်းချပြီးစီးမှု ၊ ငွေလွှဲပြောင်းပြီးစီးမှု ၊ မော်တော်ယာဉ်လက်ကျန်စာရင်းစသည်များအား ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာ တင်ပြရပါမည်။
(ဂ ) လျှောက်ထားနိုင်သည့် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား/ ခုနှစ်များ၏ Invoice မူရင်း တင်ပြရပါမည်။
(ဃ) ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များတွင် ပါဝင်သော အထောက်အထားများ မိတ္တူပူးတွဲပါရှိရပါမည်။
(င ) ရောင်းချမှုအသေးစိတ်စာရင်း မိတ္တူပူးတွဲပါရှိရပါမည်။
(စ ) မြေပြင်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ.၏ စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းပါရှိရပါမည်။
(ဆ) သက်တမ်းရှိ အရောင်းစင်တာဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်လက်မှတ် (Consignment စနစ်ဖြင့် မော်တော် ယာဉ် တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုလက်မှတ်) အား ထင်ရှားပေါ်လွင်သည့် မိတ္တူပူးတွဲပါရှိရပါမည်။
(ဇ ) စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်လက်မှတ် မိတ္တူပူးတွဲပါရှိရပါမည်။
(ဈ ) ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်လက်မှတ် မိတ္တူပူးတွဲပါရှိရပါမည်။
(ည) Consignor နှင့် ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ် ၊ USD – 100000 သွင်းထားသည့် အထောက်အထား ၊ ငွေကျပ်သိန်း (၃) ထောင်သွင်းထားသည့် အထောက်အထား မိတ္တူပူးတွဲပါရှိရပါမည်။ အခြားပြည်တွင်းသတင်းဟောင်းများ	MINISTRY OF COMMERCEBuilding 3, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar.Tel: 067 - 408002, Fax: 067 - 408004Email: mochmo@moc.gov.mm, mocdhmo@moc.gov.mm@2011 Ministry of Commerce. All rights reserved. Powered by Inforithm-Maze
www.commerce.gov.mm	Visitors 4185177 Since June 2008